Adeegga fiidiyowga ee Apple-ka ee socda ayaa hadda la jaan qaada Google TV | Androidsis
Iyada oo ay kordhayaan adeegyada fidinta fiidiyowga, waxaa la soo gaadhay waqti ay tahay inaan ku khasban nahay weydii haddii ay mudan tahay in la wada bixiyo iyo mid kasta oo ka mid ah ama in kastoo, aan bilownay inaan la wadaagno akoonnadeena asxaabta ama qoyska si aan lacag u dhigno.
Qalabka lagu raaxeysto adeegyadan waa inuu na siiyaa suurtagalnimada inaan ku wada raaxeysanno dhammaantood. Dhamaadkii sanadkii hore, Google waxay soo bandhigtay Chromecast Google TV, nidaamka cusub ee hawlgalka wuxuu ku dhacay suuqa si uu u beddelo TV-ga Android.
Waxay qaadatay ku dhowaad 6 bilood tan iyo markii la bilaabay siiso helitaanka dhammaan adeegyada fiidiyowga qulqulaya, isagoo ah kan uu bixiyo Apple TV kii ugu dambeeyay ee yimaada. Laga soo bilaabo dhowr saacadood ka hor, haddii aad iibsatay qalab Apple ah oo aad weli ku raaxaysato dhiirrigelinta bilaashka ah ee ay bixiso, ama aad sugeysay imaatinkeeda si aad ula wadaagto koontada saaxiib ama xubin qoyskaaga ah, hadda waad sameyn kartaa haddii aad leedahay Chromecast leh Google TV.
Xayeysiiskaas, Google ma aysan soo sheegin in mustaqbalka ay gaari doonto nidaamka deegaanka ee Android loogu talagalay taleefannada casriga ah iyo kiniiniga nooc ka mid ah barnaamijka Apple TV, oo ah codsi dhakhso ama goor dambe ku dambeeya imaanshihiisa, sidoo kale Apple Music, codsi la heli jiray ficil ahaan tan iyo markii la bilaabay adeegga muusikada ee Apple.
Apple TV +, oo ah dabada ka socota adeegsiga fiidiyowga
Apple waxay diiradda saartay siyaasadeeda tayada mana ahan tiro, siyaasad u dejisay inay tahay adeegga fiidiyowga qulqulka leh ee adeegsadayaasha ugu yar (in kasta oo ay xaqiiqda tahay in Apple ay bixisay lacag-bixin sanadle ah oo bilaash ah sanad ka hor oo ay horeyba u kordhisay laba jeer).
Dhammaan waxyaabaha la heli karo waa asal oo looma sii deyn madal kale. Ma jiro wax fayl ah Sida haddii aan ka heli karno Disney +, markaa daacad u ahaanshaha isticmaaleyaasha si ay u sii wadaan bixinta khidmadda bil kasta waa dhib badan tahay, iyada oo aan la helin buug-yare soo noqnoqda oo booqda marka laga reebo taxanaha asalka ah.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Codsiyada Android » Streaming » Adeegga fidinta fiidiyowga ee Apple ayaa hadda la jaan qaadaya Google TV
Freddy Krueger oo ka socda 'A Nightmare on Elm Street' ayaa imanaya goor dhow Deadlight